Mozilla inodzokera pasi uye haizogoneke DNS-pamusoro-HTTPS muUK | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla inodzokera pasi uye haizogone DNS-pamusoro-HTTPS muUK
Tatarisana nezvichemo kubva kumasangano eBritish nezviremera, Mozilla inodzoka neyakavanzika chinhu
Mozilla inodzokera pasi nesarudzo kushoropodzwa nevanopa internet muUK. Ndezve iyo kusarongeka kushandiswa kweiyo DNS-pamusoro-HTTPS protocol.
Maererano ne Vanopa British Internet, chisarudzo chepakutanga zvaizokanganisa kuchengetedzeka kubva kuUnited Kingdom.
1 Mozilla inodzora zvine mutsindo sei?
2 Dambudziko nderei?
3 Kurambwa kwezvematongerwo enyika
4 Nei Mozilla Kudzoka shure
Mozilla inodzora zvine mutsindo sei?
Chichemo kubva kuvabatsiri veBritish chinouya kubva mukuitwa kweinonzi IETF RFC8484 protocol.
DNS-pamusoro-HTTPS inotumira DNS zvikumbiro pamusoro peyakavharidzirwa HTTPS kubatana, panzvimbo pekushandisa yechinyakare kudenha chikumbiro UDP, seyakareka DNS inoshanda. Zvakare, iyi protocol inoshanda padanho rekushandisa kwete muchirongwa chekushandisa.
Ndiri kureva izvo kubatana kwese kunoitika pakati pekushandisa uye yakavharidzirwa server inoenderana neprotocol.
Yese traffic inoitwa pasi peHTTPS. DoH domain zita mibvunzo yakavharidzirwa uye yobva yatumirwa pamusoro peyakajairika webhu traffic kune iyo DoH DNS resolutionver, iyo inopindura neIP kero yezita rezita, zvakare mune yakavharidzirwa HTTPS.
Dambudziko nderekuti application yega yega inodzora kuvanzika kweayo mibvunzo yeDNS uye inogona kugadzira rondedzero yemaseva eDNS pamusoro peHTTPS (resolution) mukugadzirisa kwayo, izvi hazvifanirwe kutsamira pane default DNS maseva eanoshanda system.
Mune mamwe mazwi, zvinoshandiswa zveDNS zvevashandisi hazvioneke kune vechitatu mapato, senge ISPs; uye yese DNS DoH mibvunzo uye mhinduro dzakavanzwa mukati megore rekubatanidza kwakanamirwa, kusinganzwisisike kubva kune imwe HTTPS traffic. Mune mamwe mazwi, ISPs uye nehungwaru masevhisi haakwanise kuongorora kwatinofamba.
British Internet Service Provider inodiwa nemutemo kuvhara mamwe marudzi emawebhusaiti. Iyi ndiyo mamiriro evaya vanogamuchira zvemukati zvinokanganisa copyright kana izvo zvakanyoreswa zvitengesi. Kune zvekare avo vanozvipira kudzivisa vana vanokanganisa vana uye nzvimbo dzekuona zvinonyadzisira.
Kurambwa kwezvematongerwo enyika
Haasi makambani chete akatsoropodza danho iri. Saizvozvowo maparamende, nheyo uye masangano ehungwaru.
Mumwe weLabour Party MP akati muImba yeMitemo akadana chisarudzo ichi "kutyisidzira kuchengetedzeka kweUK online."
Iko kutsoropodza kwakabatanidzwa neInternet Watch Foundation (IWF). Iri iboka reBritish rinotarisa rine chinangwa chakataurwa chekudzikisa kuwanikwa kwehukama hwevana pabonde zvirimo online. Kwavari, vagadziri vebrowser vaikanganisa makore ebasa kudzivirira veruzhinji veBritain kubva kune zvisirizvo zvemukati.
Ehezve, iyo GCHQ, yeBritish intelligence sevhisi inoona nezve zvemagetsi kuongororwa, haigone kusavapo. Kwavari protocol inogona kukanganisa kuferefetwa kwemapurisa uye inogona kudzikisira kudzivirirwa kwehurumende kuripo kumawebhusaiti akaipa.
Nei Mozilla Kudzoka shure
Google inorongawo kushandisa protocol mune yayo Chrome browser, kunyangwe Mozilla iri kumberi mukusimudzira kwayo, ndosaka yakagamuchira kushoropodzwa kwese. Firefox yakatanga kuyedza protocol pakutanga kwegore rapfuura, uye inoisanganisira (kunyangwe isina kuvhurwa) kubvira vhezheni 60.
Mukutaura kune vezvenhau veBritish, Sangano rakaratidza kuda kwaro kushanda nevatongi venyika. Chinangwa ndeyekuona kuti rutsigiro rweDoHfox harukanganise mawebhusaiti emablog mazita uye ISPs 'masisitimu evabereki ekudzora.
Pakutanga, Mozilla akakumbira zviremera kuti zviise pachena runyorwa rwemasaiti akavharirwa nezviremera uye ISP, kuti vakwanise kuvadzivirira kubva kubhurawuza. Nekudaro, zviremera zvakaramba, zvichiti izvi zvingaite sekugadzira "mapeji machena ezvinonyadzisira zvevana." Izvi zvaizoita kuti zvive nyore kwavari kuti vawane iyi mhando yezvinyorwa.
Nekudaro, Mozilla yakasarudza kusaita sarudzo yekusarudzika.
Ini ndinoreurura kuti ndine kusahadzika kwangu kuti hurumende nevatapi vane hanya nehutano hwevashandisi. Chinovashungurudza iko kurasikirwa kwekutonga. Zvese zviri zviviri mwana zvinonyadzisira uye kuchengetedzeka pamhepo zvinhu zvinogona kugadziriswa nedzimwe nzira dzisingaputse zvakavanzika zvevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mozilla inodzokera pasi uye haizogone DNS-pamusoro-HTTPS muUK
Linux Lite, yekutanga yekushandisa sisitimu yekukwanisa kuisa Linux 5.2. Tinotsanangura kuti sei
Uye apo isu tese tanga takatarisira rc8 ... Linus yakaburitsa yekupedzisira vhezheni yeLinux 5.2